အကဉျြးထောငျ ထဲမှာ နထေိုငျခဲ့ရတဲ့ အခွအေနတှေေ ကို ဖခငျဖွဈသူအား ပွနျလညျ ပွောပွ လာတဲ့ အသကျ (၅) နှဈအရှယျ သမီးလေး စုထကျဝိုငျး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အကဉျြးထောငျ ထဲမှာ နထေိုငျခဲ့ရတဲ့ အခွအေနတှေေ ကို ဖခငျဖွဈသူအား ပွနျလညျ ပွောပွ လာတဲ့ အသကျ (၅) နှဈအရှယျ သမီးလေး စုထကျဝိုငျး
အကဉျြးထောငျ ထဲမှာ နထေိုငျခဲ့ရတဲ့ အခွအေနတှေေ ကို ဖခငျဖွဈသူအား ပွနျလညျ ပွောပွ လာတဲ့ အသကျ (၅) နှဈအရှယျ သမီးလေး စုထကျဝိုငျး
မနကေ့တော့ အကဉျြးထောငျအသီးသီးတှငျ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးခံ ရသူမြားထဲမှ အခြို့တဈဝကျကို ပွနျလညျလှတျပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီထဲတှငျတော့ အသကျ(၅) နှဈအရှယျသာ ရှိသေးတဲ့ မိုးကုတျမွို့မှ သမီးလေး စုထကျဝိုငျးလညျး ပွနျလညျ လှတျမွောကျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီသတငျးကို ကွားကွားခငျြး ပွညျသူတှအေားလုံးကသမီးလေး အတှကျ ဝမျးသာခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။
သမီးငယျလေး လှတျမွောကျလာခဲ့ပမေယျ့လညျး သမီးကွီးနဲ့ ဇနီးဖွဈသူမှာ အကဉျြးထောငျ ထဲမှာသာ ရှိသေးကွောငျး ဖခငျဖွဈသူမှ ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး အသကျအငယျဆုံးသမီးလေး ပွနျလှတျမွောကျလာပွီး ကလေးပွောပွလာတဲ့ အကဉျြးထောငျထဲတှငျ နထေိုငျခဲ့ရတာတှကေို ပွနျလညျ ဝမြှေလာတာ ဖွဈပါတယျ။ နှဈပတျကြျောကွာ သမီးလေး ဖမျးဆီးထားခံရစဉျ ထမငျးဝအောငျ မစားရဘဲ ရခြေိုးရငျလညျး အိမျသာ ရနေဲ့သာ ခြိုးရကွောငျး ပွောပွလာပါတယျ။ သမီးလေး အဈမနဲ့ အမေ အထဲတှငျ ဘယျလိုနထေိုငျရလဲမေးတော့လညျး မကျြနှာလေး အရောငျပွောငျးသှားပွီး ဘာမှပွနျမဖွတေော့ကွောငျး ဖခငျဖွဈသူမှရေးသားထားပါတယျ။
စိတျဒဏျရာအခြို့နဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးရတော့မယျ့ သမီးဖွဈသူကို ကွညျ့ပွီး စိတျမကောငျး ဖွဈနကွေောငျးကိုလညျးအခုလို ရေးသားပွောပွထားပါတယျ။ ” သမီးငယျ စုထကျဝိုငျး မနကေ့ ဖမျးဆီးခံထားရခွငျးမှပွနျ လှတျလာပါတယျ” .သမီးကွီးနဲ့ သူ့အမကေိုတော့ ဖမျးဆီးထားဆဲပါ။ စုထကျဝိုငျးလှတျမွောကျရေးအတှကျ ကွိုးစားပေးကွပါသော နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးမြား၊ ပွညျတှငျးတျောလှနျရေးအငျအားစုမြားအားအထူးကြေးဇူးတငျရှိပါတယျဗြာ.သမီး​လေး လှတျလာကွောငျး အဆကျအသှယျရရခွငျးဘေးကငျးရာ သို့ ပွနျလညျချေါထုတျနိုငျရနျကွိုးစားပေးကွသော GZလူငယျမြား.လမျးခရီးတလြှောကျစောငျ့ရှောကျပေးကွသူမြားအားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
နှဈပတျကြျောကွာဖမျးဆီးခြုပျနှောငျထားစဥျ. “ထမငျးဝအောငျမစားရဘူး”.”ရခြေိုးရငျ အိမျသာရနေဲ့ခြိုးရတာ”.လို့ ပွနျပွောပွပါတယျ.”ဖှားဖှားစု (ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ)” လှတျပွီလား လို့လညျးမေးပါတယျ.”မလှတျသေးဘူးသမီးရေ”ဆိုတော့ ခပျငေးငေးလေးဖွဈသှားပုံက ရငျထဲထိရှရပါတယျဗြာ။.သူ့အမေ နဲ့အမ အထဲမှာ ဘယျလိုနထေိုငျနလေညျး စသဖွငျ့အထဲကအကွောငျးတှကေိုမေးတာ မကျြနှာလေးအရောငျပွောငျးသှားပွီး ဘာ မှပွနျမပွောပွဘူး.စိတျဒဏျရာ အခြို့နဲ့ဘဝကို ဖွတျသနျးပဦေးတော့ သမီးရေ.” ဆိုပွီး သမီးလေးဖွဈပကျြခဲ့တာတှကေို ကွားသိရသလောကျ ပွနျလညျရေးသားဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သမီးလေးခံစားနရေတဲ့ စိတျဒဏျရာတှေ အမွနျဆုံးပြောကျကငျးပွီး ခှဲခှာနရေတဲ့ မိသားစုဝငျမြားနဲ့ မကွာခငျမှာ ပွနျဆုံတှနေို့ငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး ဒီသတငျး ကို တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျ။
မနေ့ကတော့ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံ ရသူများထဲမှ အချို့တစ်ဝက်ကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲတွင်တော့ အသက်(၅) နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ မိုးကုတ်မြို့မှ သမီးလေး စုထက်ဝိုင်းလည်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကြားကြားချင်း ပြည်သူတွေအားလုံးကသမီးလေး အတွက် ဝမ်းသာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမီးငယ်လေး လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမယ့်လည်း သမီးကြီးနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူမှာ အကျဉ်းထောင် ထဲမှာသာ ရှိသေးကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူမှ ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း အသက်အငယ်ဆုံးသမီးလေး ပြန်လွတ်မြောက်လာပြီး ကလေးပြောပြလာတဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် နေထိုင်ခဲ့ရတာတွေကို ပြန်လည် ဝေမျှလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပတ်ကျော်ကြာ သမီးလေး ဖမ်းဆီးထားခံရစဉ် ထမင်းဝအောင် မစားရဘဲ ရေချိုးရင်လည်း အိမ်သာ ရေနဲ့သာ ချိုးရကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်။ သမီးလေး အစ်မနဲ့ အမေ အထဲတွင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရလဲမေးတော့လည်း မျက်နှာလေး အရောင်ပြောင်းသွားပြီး ဘာမှပြန်မဖြေတော့ကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူမှရေးသားထားပါတယ်။
စိတ်ဒဏ်ရာအချို့နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းရတော့မယ့် သမီးဖြစ်သူကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်းအခုလို ရေးသားပြောပြထားပါတယ်။ ” သမီးငယ် စုထက်ဝိုင်း မနေ့က ဖမ်းဆီးခံထားရခြင်းမှပြန် လွတ်လာပါတယ်” .သမီးကြီးနဲ့ သူ့အမေကိုတော့ ဖမ်းဆီးထားဆဲပါ။ စုထက်ဝိုင်းလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးစားပေးကြပါသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ.သမီး​လေး လွတ်လာကြောင်း အဆက်အသွယ်ရရခြင်းဘေးကင်းရာ သို့ ပြန်လည်ခေါ်ထုတ်နိုင်ရန်ကြိုးစားပေးကြသော GZလူငယ်များ.လမ်းခရီးတလျှောက်စောင့်ရှောက်ပေးကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နှစ်ပတ်ကျော်ကြာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားစဉ်. “ထမင်းဝအောင်မစားရဘူး”.”ရေချိုးရင် အိမ်သာရေနဲ့ချိုးရတာ”.လို့ ပြန်ပြောပြပါတယ်.”ဖွားဖွားစု (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)” လွတ်ပြီလား လို့လည်းမေးပါတယ်.”မလွတ်သေးဘူးသမီးရေ”ဆိုတော့ ခပ်ငေးငေးလေးဖြစ်သွားပုံက ရင်ထဲထိရှရပါတယ်ဗျာ။.သူ့အမေ နဲ့အမ အထဲမှာ ဘယ်လိုနေထိုင်နေလည်း စသဖြင့်အထဲကအကြောင်းတွေကိုမေးတာ မျက်နှာလေးအရောင်ပြောင်းသွားပြီး ဘာ မှပြန်မပြောပြဘူး.စိတ်ဒဏ်ရာ အချို့နဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်းပေဦးတော့ သမီးရေ.” ဆိုပြီး သမီးလေးဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ကြားသိရသလောက် ပြန်လည်ရေးသားဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပြီး ခွဲခွာနေရတဲ့ မိသားစုဝင်များနဲ့ မကြာခင်မှာ ပြန်ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီသတင်း ကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
Previous post ဟာခနဲ ဟငျခနဲ ဖွဈသှား ရလောကျ တဲ့ ရငျခုနျ စရာ အလှတရား တှေ ထုတျပွ လိုကျ ပွနျ တဲ့ “စဈပိုးအိမျ”
Next post မိခငျကွီး နမေကောငျးဖွဈနေ တဲ့ သတငျး ကွားတာ နဲ့ အပွေးအလှားပွနျသှားပွီး ကိုယျဖိရငျဖိ ပွုစုပေး နရှောတဲ့ သားလိမ်မာလေး ကြျောကြျောနန်ဒ